Phexxi: तपाइँलाई नयाँ जन्म नियन्त्रण जेलको बारे थाहा पाउनु पर्छ - औषधि जानकारी | सेप्टेम्बर 2021
स्वास्थ्य शिक्षा, समाचार स्वास्थ्य शिक्षा, कल्याण कम्पनी, औषधि जानकारी औषधि जानकारी, स्वास्थ्य शिक्षा समाचार, कल्याण भारी खेल प्रेस कम्पनी स्वास्थ्य शिक्षा, घरपालुवा जनावर समाचार मनोरञ्जन औषधि जानकारी, समाचार खेलहरु समुदाय, कम्पनी चेकआउट
मुख्य >> औषधि जानकारी >> तपाईलाई फेक्स्याक्सी के बारेमा जान्नुपर्दछ, नयाँ जन्म नियन्त्रण जेल
तपाईलाई फेक्स्याक्सी के बारेमा जान्नुपर्दछ, नयाँ जन्म नियन्त्रण जेल
धेरै %०% बच्चा जन्माउने उमेरका महिलाले गर्भ नियन्त्रणको केहि विधि प्रयोग गर्छन्। यदि तपाईं यस उमेर समूहसँग सम्बन्धित हुनुहुन्छ भने, तपाईंलाई विभिन्न जन्म नियन्त्रण विधिहरू, जस्तै पुरुष वा महिला कन्डमहरूको बारेमा थाहा छ, गर्भनिरोधक गोली , IUDs , प्याचहरू , शटहरु , प्रत्यारोपण , र योनि बजेर । तर तपाईलाई नयाँ विकल्पका बारे थाहा छैन: जन्म नियन्त्रण जेल, जसलाई फेक्स्यासी भनिन्छ।
कति समय लाग्छ यो monistat7काम गर्न को लागी
सम्बन्धित: पुरुष जन्म नियन्त्रण को भविष्य
Phexxi के हो?
Phexxi एक जन्म नियन्त्रण जेल हो जो संयुक्त राज्य खाद्य र औषधि प्रशासन द्वारा अनुमोदित छ ( एफडीए ) २०२० को मे महिनामा। प्रिस्क्रिप्सन औषधी, फेक्स्याक्सीमा ल्याक्टिक एसिड, साइट्रिक एसिड, र पोटेशियम बिटरेटरेट हुन्छ। परम्परागत जन्म नियन्त्रण विपरीत, Phexxi हर्मोनहरू समावेश गर्दैन। (जन्म नियन्त्रण गोलिहरू र जन्म नियन्त्रणका अन्य धेरै प्रकारहरू हार्मोनल गर्भनिरोधकहरू हुन्।)
Phexxi द्वारा काम गर्दछ योनीको पीएच कम गर्दै , यो स्पर्मलाई बाँच्न र अण्डमा पुग्न कठिनको लागि बनाउँदै। योनीको नियमित pH स्तर 3.5. to देखि 4.5.। छ। सामान्यतया, जब शुक्राणुले योनीमा प्रवेश गर्छ, यसले योनीको पीएच बढाउँछ, र शुक्राणु अण्डोमा यात्रा गर्न सक्षम हुन्छ। तर फेक्स्याक्सीले योनीको पीएच 3.5. to देखि 4.5. between बीचमा राख्छ, जसले स्पर्मको अण्डमा पुग्ने सम्भावना कम गर्दछ।
इभोफेम बायोसाइकेन्स फेक्सेक्सी बनाउँछ, र वर्तमानमा कुनै जेनेरिक उपलब्ध छैन।
मैले कहिले जन्म नियन्त्रण जेल प्रयोग गर्ने?
फेक्सेक्सी केवल तब काम गर्दछ जब यौन संभोग भन्दा पहिले — यसले गर्भावस्थालाई रोक्दैन यदि पछि प्रयोग गरियो। प्रयोग गर्नको लागि, यौन सम्बन्धको ठीक अघि (वा एक घण्टा अगाडि) योपूर्व भरिएको एप्लिकेटरको सामग्रीहरू लागू गर्नुहोस्।
यदि तपाइँ एक घण्टा भित्र एक पटक भन्दा बढी सेक्स गर्नुभयो भने, तपाइँ फेजेक्सीको एक अतिरिक्त खुराक प्रयोग गर्नु पर्छ।
यदि संभोग एक घण्टा भित्र देखा पर्दैन, एक अतिरिक्त खुराक लागू गर्नुहोस्।
फेक्सेक्सी अन्य गर्भनिरोधक फारमहरूको साथ प्रयोग गर्न सकिन्छ, तर यो योजायरी घण्टीहरू जस्तै नुवाआर .को साथ प्रयोग गर्न सकिँदैन। तपाइँ तपाइँको मासिक चक्र समयमा कुनै पनि समय Phexxi प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ।
Phexxi कत्तिको प्रभावकारी छ?
क्लिनिकल परीक्षणहरूमा , Phexxi सात मासिक धर्म चक्र को लागी परीक्षण गरीएको थियो। Phexxi लगभग% 86% प्रभावी थियो। त्यस समयमा लगभग १%% महिला गर्भवती भए। दिशाहरू निश्चित रूपमा अनुसरण गर्दा तपाईंको गर्भवती हुने सम्भावना कम हुनेछ।
Phexxi का साइड इफेक्टहरू के छन्?
फेक्स्याक्सीको सबैभन्दा सामान्य साइड इफेक्टहरू स्थानीय साइड इफेक्टहरू हुन् - यो ज्वरो र योनीको वरिपरि जलेको र खुजली।
अन्य साइड इफेक्ट समावेश:
योनि फंगल संक्रमण
पिसाब गर्दा दुखाई
पुरुष पार्टनरले स्थानीय साइड इफेक्टहरू पनि अनुभव गर्न सक्छ, जस्तै हल्का जलेको वा खुजली।
यदि तपाईंले मूत्र पथका लक्षणहरू अनुभव गर्नुभयो वा तपाईं वा तपाईंको साथीले असहज साइड इफेक्टहरू अनुभव गर्नुभयो भने, तपाईंको स्वास्थ्य सेवा प्रदायकलाई सूचीत गर्नुहोस्।
सम्बन्धित: यूटीआई रोकथाम र उपचारको लागि घरेलु उपचार
Phexxi, शुक्राणुनाशक, र योनि गर्भनिरोधक फिल्म (VCF) बीच के भिन्नता छ?
Phexxi योनि गर्भनिरोधकको मात्र प्रकार होइन; त्यहाँ शुक्राणुनाशक र योनि गर्भनिरोधक फिल्महरू पनि छन्। यी तीन विधिहरूले एक समानता साझा गर्छन्: ती यौन संक्रमित संक्रमणबाट जोगाउँदैनन् (एसटीआईहरू जस्तै एचआईभी, क्लेमिडिया, प्रमेह, सिफलिस)। तथापि, त्यहाँ तीन फरक फरक धेरै तरिकाहरू छन्।
Phexxi एक गैर-हार्मोनल गर्भनिरोधक जेल हो जुन प्रिस्क्रिप्शनको आवश्यक पर्दछ। यसले योनीको पीएचलाई अधिक अम्लीय दायरामा कम गर्दछ, शुक्राणुहरूको लागि बाँच्न र अण्डामा पुग्न गाह्रो बनाउँछ।
प्रभावकारिता: यो लगभग with 86% विशिष्ट प्रयोगको साथ प्रभावकारी छ।
शुक्राणुनाशक एक पदार्थ हो कि शुक्राणुको सम्पर्कमा आउँदा शुक्राणुहरूलाई मार्छ। शुक्राणुनाशक जेली, क्रीम, फोम, सपोसिटरी, र फिल्मको रूपमा फेला पार्न सकिन्छ। धेरै जसो शुक्राणुनाशकमा नोनोक्सिनॉल -9 हुन्छ। सूत्रमा निर्भर गर्दै, तपाईले आफ्नो औंलाले शुक्राणुनाशक राख्नुहुनेछ वा संभोग गर्नु भन्दा पहिले निर्देशन गरिएको समयमा एप्लिकेटरमा।
शुक्राणुनाशक ओभर-द-काउन्टर (OTC) उपलब्ध छन्।
शुक्राणुनाशक मात्रै प्रयोग गर्न सिफारिस गरिदैन किनकि यो विधि 71१% मात्र प्रभावी छ।
VCF (योनि गर्भनिरोधक फिल्म) फिल्मको एक नरम, अघुलनशील वर्ग हो जुनमा एफडीए-अनुमोदित स्पर्मसाइड नोनोक्सिनोल9समावेश गर्दछ। VCF यौन सम्भोग भन्दा कम्तिमा १ minutes मिनेट पहिले योनी मैनुअल्ली सम्मिलित गरिन्छ। फिल्म विघटन, शुक्राणुनाशक को एक जेल कोटिंग सिर्जना, जो तीन घण्टा सम्म शुक्राणु मार्छ।
VCF OTC उपलब्ध छ ।
VCF माथि हुन सक्छ %%% प्रभावकारी जब प्राथमिक जन्म नियन्त्रणको रूपमा प्रयोग, र सही र स्थिर रूपमा प्रयोग भएको बेला।
कसले गर्नुपर्छ हैन Phexxi प्रयोग गर्नुहुन्छ?
जे होस् Phexxi अन्य जन्म नियन्त्रण विधिहरू, वा योनि फंगल संक्रमण उपचारको साथ प्रयोग गर्न सकिन्छ, यो योनीको औंठीको साथ संयोजनको रूपमा प्रयोग गरिनु हुँदैन, जस्तै नुभाआरिंग।
मूत्र पथ संक्रमण वा असामान्यताहरूको इतिहास भएका महिलाले आफ्नो स्वास्थ्य सेवा प्रदायकसँग फेक्स्याक्सीको जोखिमको बारेमा छलफल गर्नुपर्दछ। फेक्स्याक्सीले सिस्टिटिस (मूत्राशय संक्रमण), पाइलोनेफ्राइटिस (मिर्गौला संक्रमण), र अन्य प्रकारको मूत्र पथ संक्रमणहरू निम्त्याउन सक्छ।
Phexxi संभोग पछि गर्भावस्था रोक्नको लागि प्रयोग गर्नु हुँदैन। निर्देशन अनुसार सम्भोग गर्नु अघि मात्र यो प्रयोग गर्नुपर्दछ। यो STIs को बिरूद्ध सुरक्षा गर्दैन।
Phexxi को फाइदा र विपक्ष के हो?
Phexxi को पेशेवरहरु:
घर मा इरेक्टाइल डिसफंक्शन को उपचार कसरी गर्ने
साइड इफेक्टहरू सामान्यतया स्थानीय / योनि क्षेत्रमा सीमित हुन्छन्।
बीमा द्वारा कभर हुन सक्छ (योजनामा ​​निर्भर गर्दै)।
फेक्स्याक्सीमा हर्मोनहरू हुँदैन (जस्तै एस्ट्रोजेन वा प्रोजेस्टिनहरू)।
पिल्स लिनको लागि सम्झनु पर्दैन c सम्भोग भन्दा पहिले आवश्यकको रूपमा प्रयोग गर्न सक्दछ।
Phexxi को विपक्ष:
Phexxi जन्म नियन्त्रण को अन्य विधिहरु को रूप मा प्रभावी छैन।
Phexxi यौन संक्रमित संक्रमणको विरूद्ध सुरक्षा गर्दैन।
केहि साइड इफेक्ट कष्टप्रद हुन सक्छ।
मूत्र पथ संक्रमण वा समस्या भएका बिरामीहरूले फेक्स्याक्सी प्रयोग गर्न सक्षम नहुन सक्छन्।
Phexxi जन्म नियन्त्रण जेल कसरी प्राप्त गर्ने
Phexxi प्रिस्क्रिप्शन द्वारा उपलब्ध छ। यदि तपाईंलाई लाग्छ कि फेक्सेक्सी तपाईंको लागि एक राम्रो गर्भनिरोधक विकल्प हुन सक्छ, परिवारको योजना र जन्म नियन्त्रण विकल्पहरूको बारेमा तपाईंको महिलाको स्वास्थ्य प्रदायकसँग कुरा गर्नुहोस्। यदि तपाईंको स्वास्थ्य सेवा प्रदायकले निर्धारित गर्दछ कि फेक्सेक्सी तपाईंको लागि उपयुक्त छ, तिनीहरूले फेक्स्याक्सीको लागि प्रिस्क्रिप्शन जारी गर्न सक्दछन्। Phexxi तपाईंको बीमा द्वारा कभर नहुन सक्छ। तपाइँ तपाइँको प्रिस्क्रिप्शनमा एको साथ पैसा बचत गर्न सक्नुहुन्छ एकलकेयर कूपन ।
एक प्रकाश थेरेपी बक्स छनौट: तपाइँको सजिलो किन्न गाइड
के यो म्याद सकिएको चिसो औषधि लिन सुरक्षित छ
नली संग पोर्टेबल पानी ट्यांकी
स्याउ साइडर सिरका को साबित स्वास्थ्य लाभ
के तपाइँ जन्म नियन्त्रण प्राप्त गर्न बीमा चाहिन्छ?